အင်ဒိုရာ - တိုက်ကြီး၏မြောက်ဘက်-အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးဥရောပတွင်အရှိဆုံးတောင်တန်းနိုင်ငံများထဲကတစ်ခု။ ဒါဟာနီဇ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောတောင်တန်း၏နှလုံး၌တည်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ skis ပေါ်တက်ရ!
အင်ဒိုရာအတွက်တောင်တန်းသည်အဘယ်သူ၏အမြင့် 2000 မီတာထက်ပိုကောင်းပို 65 ထိပ်, ပါဝင်သည်။ တောင်တော်၏အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်တိုင်းပြည်၏အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြင့်မား, မေ့မြော Pedrosa မှစဉ်းစားသည်။ ဒါကြောင့်အနီး၏နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Pal-Arinsal ။ မေ့မြော Pedrosa အတွက်လူကူးမြင့်တက်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော skiers အဘို့အခက်ခဲထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အကြောင်းကို 4.5 နာရီကြာမပေးပါ။
ကျွမ်းကျင်သူများက Riabal ထိပ်၏အရှေ့တောင်ဘက်ခြေလျင်မှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ရေတံခွန်အနီးရှိတောင်ကိုတက်ဖို့အကြံပြုသည်။ ပထမဦးဆုံးကီလိုမီတာတောင်တက်လမ်းကြောင်းစဉ်အတွင်းထိပ်ဆီသို့သွားသည်, ပြီးတော့လက်ဝဲလှည့်နှင့်တစ်ဦးရောက်ရေချိုငါးရေကန်အားဖြင့်၎င်း, အမည်တူ၏မြစ်တလျှောက်မေ့မြော Pedrosa တောင်ပိုင်းတောင်စောင်းစေပါတယ်။ ထို့နောက်တောင်ကြီးတောင်ငယ်လမ်းကြောင်းမြောက်ဘက်လှည့်နှင့်ပါအိုင် Estany Negre န်းကျင်တတ်၏။ ကနောက်ကွယ်မှသင်အရှေ့မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ထိပ်ကိုသွားဖို့ကျောက်တောင်ကျမ်းပိုဒ်မှဖွင့်သင့်ပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာတော့ကျောင်းအုပ်ကြီး massif ဗဟိုမှထုံးကျောက်များနှင့်လှိုဏ်သိုက်၏အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ပါသည်ပုံဆောင်ခဲရော့ခ်သို့မဟုတ်အယ်လ်ပိုင်း landforms, ရေခဲမြစ်လွှမ်းမိုးစတင်ဖို့။ အရှေ့ဘကုန်းမှအတန်ငယ်လျှော့ချနှင့်အရေအတွက်ကိုငျကွားအင်တုံတိုးပွားလာနေသည်။ အဆိုပါခရီးသွားဧည့်ကိုသာလိမ့်မည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တောင်တက်, ဒါပေမယ့်လည်း, တက်အနည်းငယ်စောင်းပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောကိစ္စများတွင်အင်ဒိုရာအတွက်တောင်အမြင့်အစစ်အမှန်ထင်းရှူး, ထင်းရူးသို့မဟုတ်ရောထွေး (သပိတ်ပင်, Beech, သစ်အယ်သီး) ကျွန်းသစ်သို့ရဖို့, 1800-2100 မီတာထက်မပိုပါဘူး။ ဒီအဆင့်ကိုအထက်ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်းပုံနဲ့တူတဲ့မြေထဲချုံနှင့် Meadows ၏ဂုဏ်, ရှိပါတယ်။ ဒီမှာရာသီဥတုကတော့နွေးသမနီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အရိုင်း, ခဲနှင့်သံသတ္တုရိုင်းများနီဇ်လည်းကြွယ်ဝတဲ့သိုက်။ တောင်ပေါ်မှာသငျသညျ glacial မူရင်းအများအပြားယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေကန်များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုအင်ဒိုရာတောင်၏မေးခွန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကမိုးရေချိန်ကဒီမှာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းအများစုသူတို့က, ဆီးနှင်းဖုံးဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ ဒါကြောင့်တောင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဒီမှာတီထွင်နေသည်, ပြင်ပနိူး၏မွေ့လျော်ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထိပ်အကြားကအစာရှောင်သောတောင်ပေါ်မြစ်များမှတဆင့်စီးဆင်းနှင့်အတူကျဉ်းမြောင်းသောချိုင့်ကြသည်။ သူတို့ထဲကအရှည်ဆုံး Vapirov အရှေ့, မြောက်နှင့် Big Vapirov Vapirov ဟုခေါ်ကြသည်။
သွားရောက်ကြည့်ရှု အင်ဒိုရာ နှင့်နှင်းလျှောစီး - ကသာမန်ထဲကတစ်ခုခုပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံဟာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစား၌ရှိသမျှသောပရိတ်သတ်များအဘို့အဘုရားဖူးတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနှင်းလျှောစီးရာသီဧပြီလလယ်မှဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်ထံမှကြာရှည်ခံသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်းနှင်းလျှောစီးအဘို့လမ်းကြောင်းကျောင်းအုပ်ကြီး၏သုံးခရိုင်အာရုံစိုက်နေသည်:
Naturlandia ။ , La Rabassa ၏ဧရိယာ၌တည်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အင်ဒိုရာအတွက်တောင်များ 1960 ကနေ 2160 မီတာမှကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ Naturlandia သငျသညျ 15 ကီလိုမီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းအရှည်နှင့်အတူအခက်အခဲအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်၏ငါးနှင်းလျှောစီးပြေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကိုတစျဦး၏မာနထောင်လွှား အင်ဒိုရာအတွက်အပန်းဖြေ သူ့ဟာသူတစ်စွတ်ဖါး (အရှည် 5.3 ကီလိုမီတာ) ရက်တွင်နွယ်ဖွားများအတွက်ကမ္ဘာကြီး၌ရှည်လျားသောဆလိုက်သည်။ ဒါ့အပြင်ဤနေရာတွင်သင်ကမြှားပစ်, မြင်းစီးခြင်း, paintball နှင့်စနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်စီးနင်းလေ့လာသင်ယူ, တစ်ဦးကို Quad စက်ဘီးစီးနိုင်ပါတယ်။
Vallnord ။ ဒါဟာအများအပြားနှင်းလျှောစီးဘူတာပေါင်းစပ်: Ordino-Arcalis, Arinsal နှင့် Pal ။
Grandvalira ။ အယ်လ် Tarter နှင့် pas de la CASA - အဆိုပါဧရိယာ Soldeu ၏လမ်းဆုံဒေသများမှာတည်ရှိပါတယ်။
သငျသညျတောင်တက်တစ်ပန်ကာများမှာရင်တောင်အင်ဒိုရာအတွက်တောင်များသင်တို့အဘို့အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့၏အမြင့်နီးပါးရထားလမ်းနှင့်လမ်းကိုတင်သောအတွက်လေးနက်သောအခက်အခဲများ, အဖြစ်ခက်ခဲတောင်တက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်သောတူညီသော (1600-2500 မီတာ) ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝအအချက်များများ၏သက်ရောက်မှုကဖွဲ့စည်းသောလူပေါင်းကားကျမ်းပိုဒ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောက်စရစ်ခဲတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါလေပြင်းများကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသည်။
177 အဆိုပါနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းခွင့်, 296 ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိရာ၏အရှည်မှာတငျနေကြသည်။ အဆိုပါနွယ်ဖွားရာဌာန၌သင်တို့ကို 105 စက်မှု LIFT ကယ်နှုတ်တော်မူမည်အကြောင်း, 1349 ကိုအပိုင်းပိုင်း၏တောင်ပေါ်မှာမိုဃ်းပွင့်သေနတ်၏နံပါတ်။ ၎င်းတို့၏အကူအညီဖြင့်တစ်ဦးအကောင်းဆုံးမိုဃ်းပွင့်အဖုံး (0,4-3 မီတာ) ၏အထူနဲ့တောင်စောင်းအထူးကိရိယာများကို အသုံးပြု. compacted ထိန်းသိမ်းရန်။
ဒီမှာရာသီဥတုကအတော်လေးနွေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအများအားဖြင့်ရကျိုးနပ်သည်: တိုင်းပြည်အတွင်းတောင်များဥပမာအားဖြင့်အဲလ်ပ်တောင်တန်း, ဒီမှာရောက်ရှိတော်မူပြီးမှ, သငျသညျနှင်းလျှောစီးအဘို့အလက်တွေ့ကျကျနေ့တိုင်းလုပ်နိုင်, သကဲ့သို့မြင့်မားမဟုတ်ကတည်းက။ အင်ဒိုရာ၏နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းသင်သည်သူတို့၏လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အအရင်ကဆိုရင်နှင့်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်လမ်းကြောင်းများအတွက် downhill ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ဒါပေမယ့်လည်းဟိုတယ်-class နဲ့စားရန်အရသာအတွက်ဖြေလျှော့ဖို့မသာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သားသမီးတို့အဘို့ထိုသူတို့သညျမိမိရောက်ရှိပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးရက်ပေါင်းပြန် skis အပေါ် get ကိုကူညီအထူးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များရှိပါတယ်, နှင့်လေးတွေများအတွက်အထူးမူလတန်းကျောင်းရှိပါတယ်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့မြို့တော်ကနေ 22 ကီလိုမီတာကျောင်းအုပ်ကြီး၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤတွင်ချိုင့်, spiky တောင်ကြီးတောင်ငယ်ထိပ်ကဝိုင်းတောင်စောင်းများနှင့်အရေအတွက်ကတခြားနေရာနိုင်ငံအတွင်းထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒါကြောင့်သင်သွားလိုလျှင်, နှင်းလျှောစီးပြီး, ဒါပေမယ့်လည်း snowboarding မသာတစ်ခုစံပြ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Ordino-Arcalis ပွင့်လင်းနှစ်ခုအားကစားစင်တာ, "Ordino Multisport Center က" နှင့်ဧည့်သည်များရေကူးနိုင်မည့် "Ordino အားကစားစင်တာတွင်" ကျွမ်းဘား, ဘိုးလင်း, အလေးမ, squash နှင့်တင်းနစ်လုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်သဘာဝပန်းခြံ Sorteny, မည်သည့်ရာသီဥတုအတွက်ပျော်မွေ့နိုင်သည့်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်များစွာသောဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်လည်းမရှိ။ မြို့တော်ထဲကနေဒီနေရာရဖို့တစ်လိုင်း CG3 သို့မဟုတ် Ordino အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူအထူးဘတ်စ်ကားပေါ်မှာစက်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ လက်မှတ်ခများ - 1 - 2.5 ယူရို, 7,00 ကနေ 19,00 ဖို့လမ်းကြောင်းနေစဉ်။
Pal အင်ဒိုရာ၏အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်, တစ်မိသားစုများအတွက်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကလေးတွေနဲ့အတူအားလပ်ရက် ။ သငျသညျ 1780-2358 မီတာအမြင့်မှာနှင်းလျှောစီးမှာသင်၏လက်ကိုကြိုးစား, နှင့်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော skiers တော်တော်လေးယုံကြည်မှုခံစားရရန်ကျယ်ပြန့်အလုံအလောက်နှင့်ရှည်လျားသောလမ်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိ။ အဆိုပါ Palais အများဆုံးဆီးနှင်းအမြောက်များအာရုံစူးစိုက်။ ဤနေရာတွင်တိုင်းနှစ်နာရီမှတဆင့်အောက်ပါမြို့တော်ကနေဘတ်စ်ကားတတ် , La Massana (လက်မှတ်စျေးနှုန်းကို 1.5 ယူရို) ။ ကားတစ်စီးအားဖြင့်သင် CG5 လမ်းမှသွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, အလှည့် Erts နှင့် Iksiksirella များ၏ရွာကိုဖြတ်ကူးဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။
Arinsal လက်တွေ့ကျကျဘေးက Pal ရန်,, La Massana မြို့အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ ဤတွင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစား၏အစစ်အမှန်အပြစ်တွေလာကြ၏။ Arinsal ခုနှစ်, သငျသညျ 1010 မီတာအင်ဒိုရာအရှည်အတွက်အခက်ခဲဆုံးတောင်စောင်းကိုဆင်းနေတဲ့စီးနင်းကြိုးစားနိုင်, နှင့် 24-ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်းသေချာပေါက်အာရုံစိုက်မှုနှင်းလျောစီးနိူးဆွဲဆောင်။ ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိစေရန်, သငျသညျ Pal ၌ရှိသကဲ့သို့, လည်းလို့ရတယ်။
pas de la CASA နှင့် Grau Roig
ပြင်သစ်နှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်, အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်သည်အဘယ်မှာအားလုံးအရသာကိုက်ညီရန်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အချို့တို့ကိုပင်ညဥ့်အချိန်တွင် illuminated ။ မဝေးတော့တဲ့ built ခရီးသွားဧည့်များ၏အဆင်ပြေ LIFT ဟိုတယ် နှင့်နှင်းလျောစီးဘို့ပန်ကာပန်းခြံနှင့် "အုံ-ပိုက်" ကိုပရဒိသုကျေးဇူးတင်စကားလည်းမရှိ။ ဒီမှာခွင့်၏မြို့တော်၏ L5 ဘတ်စ်ကားတစ်နေ့လျှင် 3-5 ကြိမ် (ခ5ယူရို) ပြေးသို့မဟုတ်သင်ယူနိုင်ပါသည် Funicamp cable ကိုကားတစ်စီး ။
Soldeu - အယ်လ် Tarter
မြို့နှစ်မြို့အကြားအကွာအဝေးနှင့် ပတ်သက်.3ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နှင့်အတူနယ်စပ်နှင့်အတူတူပင်အကွာအဝေးခြားနားမြို့တော်ကနေ။ ဒီမှာနှင်းလျှောစီးဧရိယာရွာအထက်အတော်လေးမြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှင်းလျှောစီးပြေး၏အရှည် 88 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ Tossal de la Losada - adrenaline ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဒေသဘယ်အရပ်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ထံမှ 500 မီတာအမြင့်ကခြားနားချက်နှင့်အတူအထူးနှင်းလျှောစီးလျှောစောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တောင်စောင်းကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်, သင်တောင်တော် Enkampadana (2491 မီတာ) ၏အနောက်ဘက်အခြမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကနေတိုင်းနာရီ အင်ဒိုရာ၏မြို့တော် ဒီမှာဘတ်စ်ကား (3 €လက်မှတ်စျေးနှုန်း) တတ်၏။ သင့်ကားပေါ်တွင်ရဖို့, ချောင်းကို CG1 ပြေး။
အင်ဒိုရာအတွက်တောင်များရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်: သူတို့ပြည်နယ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဓိကအားဖြင့်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသုံးပေမယ့်လည်းမြို့ပြဒေသများနှင့်ကျေးရွာများအကြားဘတ်စ်ကားမကြာခဏသက်တမ်းထပ်တိုး။ လမ်းမျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးအလွန်မြင့်မားကြောင်း, ဒီမှာခရီးသွားတွေအဆင်ပြေဘို့များစွာသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတပ်ဆင်ထားကြသည်။ 2-3 နာရီ (€ 40 အခွအေ) အတွက်ဘာစီလိုနာကနေဘတ်စ်ကားအားဖြင့်အင်ဒိုရာ၏မြို့တော်မှလာ, ပြီးတော့ခြေမကကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ခရီးသွားသုံးစွဲဖို့ရှိသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းမီးရထားဘူတာသို့မဟုတ်လေဆိပ်မကျင့်။ အဆိုပါနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းမှဟိုတယ်ထံမှရရန်, သင်ကပုံမှန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုနှင်းလျှောစီး-ဘတ်စ်ကားကိုသုံးနိုင်သည်။ ပျမ်းမျှ 3000 pesetas အပေါ် LIFT မှာလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်။
လီချင်စတိန်း - ဆွဲဆောင်မှုများ
နော်ဝေအတွက် Tours မှ
နနွင်း - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
မိုက်ကယ် Mercier နှင့် Hubert ရောဘတ် Hossein
ဒစ္စနေးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ 35 ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တက်တူး
အမျိုးသမီးတွေအတွက်မကြာခဏဆီးသွားခြင်း - အကြောင်းတရားများ
Liam Neeson စိတ်မသာညည်းတွားကြားဖြတ်နှင့် "လှပသောသူစိမ်း" ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်
Croton - ရှနေဖြင့်ဝါဒဖြန့်